इन द टाइम्स अफ कोरोना (कथा)- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
इन द टाइम्स अफ कोरोना (कथा)
चैत्र २२, २०७६ जयराज भट्टराई
डे टु- घामको सानो टुसो पलाइसकेको हुनाले उज्यालो पर्याप्त नभए पनि प्रशस्तै थियो । गोल्डस्टार जुत्ताका तुना कसेर बास्केटबलझैँ ऊ चारपटक उफ्रियो ।
तत्पश्चात् बाटातिर फुत्त निस्केको मात्रै थियो, उक्त घटना भइदियो । पिठ्यूँमा जोडदार किसिमको गड्याम्म . . . ! ठक्करले ऊ भ्वाक्क पछारियो । गड्याम्म सँगसँगै अन्य कर्कश आवाजहरु पनि गुञ्जयमान भए—
सुरुरुरुरुरु.... छिन्द्रिङ्ग......घरररर्‍याप्प.....क्याँक्क क का कि की कु कू के कै को कौ कं कः क्याँक क्वाँक क्वाँक....
(कहाँ भयो ? के भयो ? कसले गर्दा भयो ? जसले गर्दा भयो, उसलाई चाहिँ के भयो ? विसाऊँ एकछिन् । थोरै समय डे वान तिर फर्किएर हेरौँ । हतार के छ साथी ? बाहिरफेर डुलिहिँड्न हुँदैन । नाङ्लो ठटाउँदै चोकचोकमा उभिएको छ त्रासदी । फुर्सद ब्रम्हाण्ड झैँ फिँजारिएको छ । कोरोना टाइममा हामीसँग प्रचूर मात्रामा उपलब्ध जिनिस भनेकै टाइम हो ।)
छिटो छिटो उठेर, आची सुसु त्यागेर, जिउ सिञ्चन सकेर, चियासातु ठोकेर दुई किलोमिटर पर्तिर फुटानी चोकमा रहेको जुत्ता पसलको सटर उघार्न पुगिसक्ने उसको दैनिकी हो । लागेको बानीले गर्दा आज पनि साविककै समयमा उठ्यो । चिया उमाल्यो । एक बटुको सातु बजायो ।
आजदेखि सटर उघार्न नपाइने उर्दी हिजै जारी भइसकेको हुनाले जानु कतै थिएन । त्यसैले गयो आफ्नै शयनकक्षमा जहाँबाट ऊ उठेर आएको थियो, जहाँ उसकी श्रीमती अहिले मस्तरामसँग कुनै स्वप्नशहरमा उडिरहेकै थिई । श्रीमतीको मुहारमा एकैछिन एकोहोरिएर फेरि भान्छाकोठा तिर पस्यो । एक कप चिया पकायो र त्यो लिएर पुनः शयनकक्षतिर छि¥यो । श्रीमतीलाई नाकमा समातेर हल्यायो... कानमा समातेर हल्लायो...गालामा समातेर हल्लायो...श्रीमतीले आँखा खोली ।
उसले किच्च गर्‍यो किनभने निकै महिना वा वर्षपछि श्रीमतीका लागि आफ्ना हातले चिया पकाइदिएको थियो । श्रीमतीले पनि किच्च गरी किनभने चियाको अफरका साथमा श्रीमान्‍ले गाला समातेको यो ऐतिहासिक क्षण थियो । श्रीमतीले ओछ्यानमा पलेँटी मारेर चिया पिइरही, उसले हेरिरह्यो । चिया निख्रिएको कपलाई साइड लगाइदियो र श्रीमतीका साइडमा घुस्रियो । पलेँटी आसनबाटै श्रीमतीले ढप्किएको ढोकाको चुकुलतिर एक नजर फ्याँकी । चुकुल राम्रैसँग लागेको सुनिश्चित भएपछि ऊ पनि सुत्ने कर्ममा लागी ।
सेकेन्ड लटको निद्राबाट व्युझिँएर निस्किँदा उसकी श्रीमती चाहिँ भान्सामा आलु ताछ्न थालेकी थिई । उसले सोध्यो— ‘भाइ उठेन ?’
‘उठिसक्यो’— उसले भनी ।
यतातिर छोरालाई भाइ भन्नेहरुको संख्या धेरै भएको हुनाले यो स्वाभाव स्वस्फूर्त रुपमा उभित्र पनि पसेको थियो ।
(कोरोना टाइम हो साथी । लुखुरलुखुर हिँड्ने समय होइन । हतार के छ ? अझै एकछिन डे वानमै बसौँ ।)
ऊ छोराका कोठातिर लम्क्यो । ढोकामा उभिएर एक ख्वाङ खोक्यो र दैलो विस्तारै ठेल्यो । छोरो ओछ्यानमा सिरानेको अढेस लागेर मोबाइलमा घोप्टेको थियो । बजारतिर गफ हुनेगथ्र्यो— सत्य, द्वापर, त्रेता पछाडि कलियुग पनि सिद्धिएर हिजोआज घोप्टे युगको सुरुवात भएको छ । उसलाई थाहा थियो कलियुग समाप्तिको घोषणा गरी घोप्टेयुगलाई स्वागत गर्ने काममा आफ्नो सत्र वर्षे छोरोको पनि अहम् भूमिका छ ।
पुत्र निरीक्षण पश्चात् ऊ घरअगाडि सातफुटे आँगनमा आइपुगेको थियो । भान्छासहित जम्माजम्मी तीनकोठे घरमा अब निरीक्षण गर्न बाँकी केही थिएन । माथि उक्लिनलाई तला थपेको थिएन । तला थप्ने गुञ्जायस पनि थिएन किनभने छानो टिनको थियो, दिवालहरु पाँच इन्चे र सिमेन्टीका पिलरहरु चाहिँ पिलन्धरे । भएको एक कट्ठा जग्गामा घरलाई सकेसम्म र मिलेसम्म कुनातिर कोचेको थियो । बाँकी स्थानमा हरियोपरियो खनीखोस्री गर्न राम्रै आइडिया लगाएर ठाउँ उबारेको भन्न सकिन्थ्यो ।
(अब एकछिन उसको बारी पसौँ । आलुको रस, बैगुनको तरकारी र भात भित्र पाक्दैछ । केही हतार छैन ।)
ऊ बारीतिर पस्यो । उसले भन्दा पनि श्रीमतीले अधिक कोसिस गरेर निकै धेरै आइटम खाँदखुद पारेर फलाएकी थिई । मकैका बोटमा जुँगा हल्लाउँदै हरिया घोगा टाँसिएका, केही थान बैगुनहरु उँधोमुन्टो लगाएर झुण्डिएका, कल्कलाउँदा लट्टेका साग पनि अँटाएका, कागतीको बोट पनि छ । ऊ निकै पुलकित देखियो । अझै निकैबेर पुलकित हुन्थ्यो होला तर चारवटा राता खुर्सानी टिपेर फर्कियो किनभने श्रीमतीको ध्वनितरङ्ग भर्खरै सुनिएको थियो— ‘खाना पस्किसकेँ मैले ।’
श्रीमतीको दैनिकी पनि अलिकति फेरिएको थियो । अरु दिन यो समयमा ऊ हटकेसमा विहानी खान्कीको सेट बोकेर लोग्ने अघाउन पसलतिर कुद्ने गर्थी । छोरोको दैनिकी पनि अलिकति फेरिएको थियो । अरु दिन यो समयमा एघार कक्षा पढ्न स्कुलतिर कुद्ने गर्थ्यो । अथवा भनौँ स्कुल नै जान्छु भनी घरबाट चाहिँ उडिसकेको हुन्थ्यो ।
अहिले चाहिँ भातको वाफ उडिसकेको हुनाले तीनैजना भोजनमा व्यस्त हुन थाले । उसले टेबलमा आसीन चारथान खुर्सानी मध्ये एउटा टिपेर आलुको तातो तातो रसमा आत्था आत्था गर्दै बेस्कन मिच्यो । यो समयमा इन्ट्रेस्टिङ वार्तालाप खासै भएन । यसखाले फुर्सदको सकारात्मक पक्ष देखाउँदै मोबाइलमा कम र पठनमा बढी ध्यान दिन छोरोलाई खराँट सल्लाह दियो, जुन सल्लाह छोरोले त्यति रुचाएको देखिएन । छोरो यस प्रकारका महत्वहीन विषयहरुमा अलि कम्ति नै बोल्दथ्यो, आना र लालगेडीका हिसाबले । आफूलाई बचाउ गर्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ खरो अधिवक्ताको रुप धारण गर्दथ्यो ।
यसपछि ऊ श्रीमतीतर्फ फर्कियो— ‘बेलुकी स्वाद फेर्न केको रस खान सकिएला ?’
‘भरे पनि आलुकै रस खानुपर्ने भो । अलि धेरै नै उसिन्निएछ ।’
छोरोले ‘ह्या’ भन्यो । कुन विषयमा ह्या भन्यो ? बाबुको दिव्योपदेशका लागि वा आलुको रसको पुनरुत्थानका सम्बन्धमा ? यो बुझ्न सकिएन ।
दिउँसो उसले समय कटाउन धेरै प्रकारका काम गर्यो‍ । बस्यो । उठ्यो । बारीमा पस्यो । निस्कियो । सुत्न कोसिस गर्‍यो, सकेन । फेरि उठ्यो । फेरि बस्यो । फेरि बारीमा पस्यो । यस पटक चार घोगा मकै भाँचेर ल्यायो । आँगनमा मुडामा बसेर चारै घोगालाई नाङ्गेझार पारेर छोडाउन थाल्यो । घरअगाडि पैनीका डिलमा झाङ्गिएको बुहारी झारको झुत्तोलाई एउटा दानोले ताकेर हान्यो । संयोगवश लाग्यो र बुहारी लाजले भुतुक्कै भइन् । उनका केही पातहरु स्यापसुप्पै बन्द भए । ऊ फिस्स हाँस्यो । अर्को दानो पनि ताक्यो तर हानेन । अरु मकै खर्च गर्नु मुनाशिव थिएन किनभने पैसा खर्च गर्नभन्दा मकै खर्च गर्न डराउनुपर्ने परिस्थिति हुर्कदैँ आएको थियो ।
श्रीमतीले ती च्याउ–मकै भुटिदिइन् । खायो । बस्यो । उठ्यो । फेरि बस्यो । फेरि उठ्यो । बाटाका डिलमा निस्किएर दायाँ तर्फ हे¥यो । पचास मिटर पर सुब्बाको घर सुनसान छ । वायाँ तर्फ हे¥यो । सय मिटर पर न्यौपानेको घरमा पनि चालचोल छैन । छिमेकीको घर पनि अब कोरोनाको गुँडजस्तो देखिन थालेको समय थियो ।
फर्केर घरभित्र पस्यो । बस्यो । उठ्यो । फेरि बस्यो । फेरि उठ्यो । तला नभएकाले तल माथि गर्ने उपाय थिएन । भित्र बाहिर कयौँपटक गर्यो‍ । बडो सुस्तरीसँग घाम डुब्यो ।
(अरे साथी ! यो हतार गर्ने समय होइन क्या । बेलुकीको भातभान्छा हेरौँ । अनि डे टु तिर फर्किउँला ।)
बेलुकी तीन सदस्यहरु पुनरुत्पादित आलुको रससँग भोजन गर्न बसे । बैगुनको सट्टामा लट्टेको साग, नौलो कुरो यही देखियो । पहिलो गाँस निलेर उसले भन्यो— ‘यस्तो हिसाबले त जिउ कुँजिने भो ।’
छोरोले वास्ता गरेन । श्रीमतीले गाँस रोकेर हेरी । उसले ऐलान गरिदियो—‘भोलि देखि फुटानी चोकसम्म मर्निङ वाकमा निस्किने ।’
‘घरमै उठबस गर्नू, उफ्रिपाफ्री गर्नू । किन निस्किनू बाहिरफेर ? किटाणू बोकेर आउन ?’ – श्रीमतीबाट यस्तो चिन्ता जाहेर भयो । श्रीमतीबाट प्राप्त हुने यसप्रकारका तसल्लीहरुको पालना गर्ने उसको स्वाभाव थिएन । यद्यपि, श्रीमतीले भन्न छाडेकी पनि थिइनँ ।
‘ननिस्किनू बुबा । लुखुरलुखुर डुली हिँड्नेलाई पुलिसले खेदेको भिडियो भाइरल भाछ अहिले ।’ — छोरोले पनि विषम परिस्थिति सम्बन्धी ध्यानाकर्षण गरेर छोरो हुनुको कर्तव्य पुरा गरिदियो ।
‘केही हुन्न भाइ ! फुटानी चोकतिर मर्निङ वाक गर्नेहरु अनगिन्ती हुन्छन् ।’
महामारीको समयमा स्वस्थ भइदिइरहनुलाई राष्ट्रसेवा मान्न सकिन्छ । त्यसमा अझ व्यायाम थप गर्नु भनेको त उग्र राष्ट्रवाद नै हुनेभयो । अरु कोही नबोलेपछि ऊ आफैँ बोल्यो—‘बरु भन ! याँ टेबलका खुर्सानी खोई ?’
‘ऊ त्याँ ।’— श्रीमतीले ग्यासचुल्होका छेउछाउतिर इशारा गरी ।
‘जा जा भाइ’— उसले अह्रायो । टिपेको गाँस हातमै बोकेर छोरो उठ्यो ।
‘यसरी त जिउ साँच्चिकै बिग्रिन्छ ।’— उसले यसो भन्दैगर्दा छोरोले भन्यो– ‘इ बुबा, लिनू ।’
उसले गफैगफमा हत्केलो थापिदियो र छोरोले खुर्सानी थपक्क राखिदियो । श्रीमतीले तत्काल टिन थर्किने गरी हप्काई– ‘हातमा किन देको ?’
‘के मा दिनु त ? र्‍यापिङ्ग पेपरमा ?’– छोरोको इरिटेसन प्रष्टै देखियो ।
‘बढेर बाँसजत्रो भइसक्यो । अझै चेत पलाको छैन । हातमा खुर्सानी दिँदा लफडा पर्छ भन्ने थाहा छैन ?’— अघि थर्काएकोले नपुगेर अरु थपी ।
‘बुबाले हात थापेर त हो नि !’
खुर्सानी नै छक्क पर्ने गरी यी तीनबीच अचम्मसँग लफडा सुरु भयो ।
(भैगो ! पारिवारिक लफडापट्टि नलागौँ । डे वानमा यत्ति नै । अब आऊँ डे टु तर्फ ।)
सुरुरुरुरुरु....छिन्द्रिङ्ग......घररर¥याप्प.....क्याँक्क क का कि की कु कू के कै को कौ कं कः क्याँक क्वाँक क्वाँक....
उसलाई पछाडिबाट दनक दिने जिनिस बत्तिएर आएको एउटा साइकल थियो । त्यो चानचुने साइकल थिएन । लोकल कुखुराको व्यापार गर्ने लोकल व्यापारीको लोकल साइकल थियो । त्यसको क्यारियरमा धेरै जतनसँग बाँसको खुँगी बाँधिएको थियो । त्यो सुरुरुरुरु चिप्लिँदै सुख्खा पैनीमा गएर बजारिएको थियो । छिन्द्रिङ्ग ! यही साइकलको चित्कार थियो भने घरररर्‍याप्प गरेर खुँगीका भाटे करङ्ग मर्किएका थिए । क्वाँकक्वाँक र कुँककुँक रडाको मच्चाउने चाहिँ खुँगीभित्रका कुखुरा थिए ।
साइकलको दनकले लड्ने वित्तिकै जुरुक्कै उठ्न ऊ सफल भयो । उठेर शरीरका प्राइभेट र पब्लिक सबै अङ्गहरुको चेकजाँच गर्दा कतै कुनै कैफियत भेटिएन । ठक्कर ताजा र तातो भएको हुनाले दुखाइको गहिराई महशुस हुने बेला भइगएको पनि थिएन । खुँगीवाल चाहिँ पैनीका डिलमा बुहारी झारको झुण्डमाथि उत्तानो परेको थियो ।
स्वपरीक्षण सकेर आफू ढुक्क भएपछि ऊ खुँगीवालतिर कुद्यो । खुँगीवाल बुहारीझारका काँडाबाट उम्किन बल गर्दै थियो । उसले खुँगीवाललाई उठ्न मद्दत ग¥यो । आँगनका डिलमा तरङिगत बेसुरको कोलाहलले घरभित्र सुतिरहेकी उसकी श्रीमतीको निद्रा बिच्किसकेको थियो । ऊ आफ्नो बिच्किएको निद्रा र खज्मजिएको कपालसँगै कुदेर आइपुगी । आइपुग्ने वित्तिकैको उसको प्रतिक्रिया एकदम सामान्य थियो—
‘ए ! तपाईं पो ?’ — यो कुरा उसले खुँगीवाललाई हेरेर भनेकी थिई ।
‘आत्थाथाथा....को हुनुपथ्र्यो ?’— बुहारीझारको काँडाले कोतरिएको पिँडुलो मुसार्दै खुँगीवालले भन्यो ।
अनि उसले पनि थाहा पायो, यो खुँगीवाल परिचित अनुहार हो । घर अगाडिको बाटो साइकलमा खुँगी च्यापेर कुदिरहने गाउँकै पात्र हो ।
‘हत्तेरिका ! बाटो काट्दा विचार गर्नु पर्छ नि !— यसो भन्दै खुँगीवाल पैनीमा बेहोस भएको साइकलतर्फ लड्खडाउँदै अघि बढ्यो ।
नचिनेको मान्छे भइदिए बाझ्न कति सजिलो हुन्थ्यो ? ‘तेरो साइकलमा ब्रेक छैन डाका ?’— यो उसले चिच्याएर भन्न सक्ने थियो । त्यसैले यतिसम्म भन्यो—‘साइकल धेरै हुँइक्याउनु हुँदो रैछ तपाईं ।’
यतिन्जेलमा दायाँतिरबाट छिमेकी सुब्बा कुदे —‘हाउ ! के पो भयो त्यतातिर ?’
बायाँतिरबाट नेउपाने दम्पती कुदे । घटनास्थल आइपुग्नु अगावै नेउपान्नीले भन्न भ्याइसकेकी थिइन्—‘पुलिस बोलाउँ...पुलिस बोलाउँ...’ । जस्तोसुकै विषम र अप्रत्यासित क्षणमा पनि सर्वोत्तम आइडिया उत्पन्न गर्न सक्ने नेपालीको विशिष्ट क्षमता यिनले देखाएकी थिइन् । तर पुलिससम्बन्धी आइडियामा कसैको समर्थन प्राप्त नभएपछि उनी चुप लागिन् । यो परिस्थितिमा पुलिसको उपस्थिति स्वागतयोग्य हुने थिएन । कोरोना टाइममा पुलिस तातेका थिए । बाटामा निस्किने बेकामे डुलुवाहरुलाई पक्षपात नगरीकन पालैपालो डन्ठी लगाउने पक्कापक्की भएको हुनाले यससम्बन्धी कुरो त्यहीँ टुङ्गियो ।
अब छिमेकीहरुबाट विविध प्रकारका आश्चार्यहरु प्रकट हुन थाले—
साइकलको आवाज सुनिनुपर्ने, किन सुनिएन ?
घण्टी बज्नुपर्ने, किन बजेन ?
बाटो काट्दा होस गर्नुपथ्र्यो, किन गर्नुभएन ?
साइकल कुदाउन मिल्दैनथ्यो, किन कुदाउनुभो ?
कुदाए पनि ठोक्नु हुन्थेन, किन ठोक्नुभो ?
ठोक्किए पनि लड्नुहुन्थेन, किन लड्नुभो ?
लडेपनि हामी आइन्जेल लडिरहनुपथ्र्यो, किन उठ्नुभो ?
निष्कर्ष निस्कियो— गल्ती दुवैपक्षको बराबर छ । हान्ने र हानिने दुवैजना परिचित भइदिएकाले छिमेकीका लागि सबैभन्दा सजिलो निष्कर्ष यही थियो ।
यिनै आश्चार्य र निष्कर्षबीच खुँगीवालको साइकल बाटाको डिलमा निस्किसकेको थियो । साइकल निरीक्षण गर्ने क्रममा खुँगीवाल झनै आश्चार्यचकित भो — ‘एउटा भाले खोइ ?’
सबैजना खुँगीका छेऊमा झुम्मिए । खुँगीको बिर्को गायब छ । खुँगीभित्र दुइटा भाले छन् । यिनीहरु एकअर्काका पखेँटामा अल्झिएर छक्क परेका छन् । कहाँ गयो बिर्को ? सबैले मल्याकमुलुक वर्तिरपर्तिर आँखा दौडाए । तर सफल भए सुब्बा ।
‘बिर्को ! बिर्को !— सुब्बाले पैनीका पल्लाछेउबाट बिर्को टिपेर ल्याए ।
बिर्को हातमा बोकेर खुँगीवाल करायो— ‘अनि भाले चाहिँ खोइ ?’
‘तिम्रो भाले कस्तो थियो ? खै फोटो देखाऊ ।’— सुब्बाले हप्काए ।
‘मलाई भाले चाहियो ।’— खुँगीवाल कस्सियो ।
‘तपाईंको भाले कता गयो, मलाई के थाहा ?’— अलिअलि दुख्न थालेछ क्यार, उसले आसन सुम्सुम्याउँदै भन्यो ।
‘भाले खोइ भाले ? बुढीले मार्छे ।’
‘साँच्चै हो के ?’
‘साँच्चै मार्छे ।’
‘भाले हराएको चैँ साँच्चै हो के ?’— नेउपानेले सोधे ।
‘कस्तो कुरो गर्नुहुन्छ ? के म ढाँटजस्तो देखिन्छु ? बुढीलाई फोन लगाऊँ ? उसले भन्दिन्छे भाले कतिवटा थियो ।’
‘वहाँले त्यसो भन्न खोज्नुभाको होइन ।’— यो भन्ने चाहिँ नेउपान्नी ।
‘त्यसोभए मलाई पैसा चाहियो । मलाई कति घाटा भयो ? साइकल पनि कतिठाउँ बिग्रेको होला । भाले पनि छैन । खुट्टो पोलेर मर्ने बेला भो । यसमाथि बुढीले अरु थप्ने भई ।’
ऊ, उसकी श्रीमती र खुँगीवालबीच त्यहाँ निकै लफडा भयो । मुश्किल त छिमेकीहरुलाई भयो । अरुको विषयमा नबोली बस्न हाम्रो काइदा अनुसार नमिल्ने हुनाले उनीहरु विवश देखिए ।
‘बरु पुलिस बोलाऊँ । कुटाइ खाइन्छ । तर, पैसो कि भाले नलिई गइँदैन ।’— खुँगीवालको अठोट यतिविध्न कडा भइसके पछि छिनोफानो गर्ने जिम्मा छिमेकीले लिए ।
छिनोफानो टोलीको सदस्य न्यौपानेले उपाय निकाले— ‘अब सबै मिलेर भाले खोजी गरौँ ।’
सुब्बा मानेनन्— ‘कता कता खोजीपठाउनु ? खोजेर भेटिन्दैन ।’
पातलो गाउँको फराकिलो इलाकामा कुन दिशाबाट भाले खोज्न थाल्नु ? सुब्बाको कुरो ठीक थियो ।
अन्तिममा छिनोफानो टोलीले निष्कर्ष निकाल्यो—‘हजार रुपिँया दिएर विदा गरौँ ।’
‘पच्चीस सय भए साउँसम्म उठ्छ । भएमध्येको सबभन्दा ठूलो भाले हो ।’— खुँगीवालले पच्चीस सयका लागि निकै बल गरिहेर्‍यो । छिनोफानो टोलीको आग्रहका अगाडि लाचार भएपछि चुप लाग्यो ।
श्रीमती अस्पष्ट किसिमका केही शब्दहरु फलाक्दै घरभित्र छिरी । घरको कुनै गोप्यकुनाबाट हजारको नोट निकाली । यो सब भइरहँदा छोरो मोरो सुतिरहेकै थियो । हजारको दण्ड च्यापेर बाहिर निस्किने क्रममा त्यसको कोठाको दैलोमा कस्सिएर एक मुड्की बजाइदिई । अनि, ऐजन ऐजन अस्पष्ट शब्दहरु फलाक्दै निस्केर आई । हातमा हजार थमाइदिएपछि खुँगीवाल साइकल टिपेर चुँइयाँ कटट आवाज निकाल्दै बाटो लाग्यो । छोरो आँखा मिच्दै निस्किँदा छिमेकीहरु छरपष्ट भइसकेका थिए ।
अब उज्यालो छिप्पिसकेको थियो र गाउँ पुनः सुनसान भइसकेको थियो । आँगनसँग जोडिएको बारीका डिलमा सपरिवार भेला गरेर उसले आदेश दियो— ‘डियर श्रीमती, तिमी मकैतिरबाट पस । भाइ, तँ बैगुनतिरबाट जा । म लट्टेतिरबाट पस्छु । एकैतालमा झ्याप्पै पार्नुपर्छ ।’
छोरोले यो सब परिस्थिति बुझिसकेकै थिएन । ठूलो भक्तिभावसँग सोध्यो— ‘यहाँभित्र के छ बुबा ?’
‘भाले छ । भाइ ! भाले छ ।’
‘साँच्ची ?’— बुढी पनि उत्साहित देखिई ।
‘साँच्ची ।’— उसले भन्यो—‘मैले खुद देखेको छु ।’
अब उसलाई हजारको कम र भालेको बढी चिन्ता लाग्न थालेको थियो । प्रकाशित : चैत्र २२, २०७६ १४:४२
विपन्‍नलाई सहयोग जुट्दै
चैत्र २२, २०७६ मनोज पौडेल
कपिलवस्तु — कपिलवस्तुका गरिब र विपन्‍न परिवारहरुलाई निजी क्षेत्रको पहलमा राहत वितरण गर्न थालिएको छ । इकान्तिपुरमा बिहीबार साँझ 'चामल नभएपछि मेयरलाई फोन गरेँ, उठाएनन्' समाचार प्रकाशन भएपछि कपिलवस्तु नगर चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष गोपीकृष्ण शर्माले अभियान नै चलाएर खाद्यान्‍न वितरण गरिरहेका छन् ।
शुक्रबार दिउँसोसम्म ७५ हजार बढीको खाद्यान्न जुटाएको शर्माले बताए । ‘कसैले समाचारलाई ट्विट गरेको रैछ,’शर्माले भने, ‘शिर्षकले मन छोयो ।’
कपिलवस्तु नगरपालिका–१२ पिपरहवाका नगरकार्यपालिका सदस्य ईन्सानअली धुनिया र सईदअली धुनियाले १५/१५ किलोका एक सय बोरा चामल सहयोग गरे । रंजीत बर्माले २५ किलो दाल र २० लिटर तेल सहयोग गरे । ध्यानेन्द्रमणी त्रिपाठीले २५ किलो दाल सहयोग गरे । नित्यानन्द बर्माले १० लिटर तेल र १० लिटर दाल सहयोग गरे । अनुप पाण्डेले १० लिटर तेल सहयोग गरे । अरु थपिदै छन् ।
शर्मा आफैंले ७ हजार बढीको खाद्यान्न प्याकिंड बोरा, दाल र तेल सहयोग गरेका छन् । समाचारमा उल्लेख भएका विपन्न कपिलवस्तु नगरपालिका–९ जगदीशपुरका मनोज परियार, कपिलवस्तु नगरपालिका–३ शिवगढका भगेलु पासी र तौलिहवाको धनौरा टोलकी सीमा कहारलाई बोलाएर सहयोग प्रदान गरिएको शर्माले बताए । उनीहरुलाई जनही १५ किलो चामल, एक किलो दाल र एक लिटर तेल प्रदान गरेको शर्माले बताए ।
शनिबार दिउँसोसम्म २० जना बढीलाई खाद्यान्न वितरण गरिसकेको उनले बताए । बाँकी सहयोग संकलन भएको खाद्यान्न नगरका गरिब विपन्नलाई प्रदान गरिने उनले बताए । खाद्यान्न पाएपछि मनोज परियार निक्कै खुसी भएर घर फर्के । ‘२ साताकालागि ढुक्क भएँ,’ उनले भने, ‘लालाबाला खुसी हुने भए ।’
कपिलवस्तु नगरपालिकाले भने लकडाउन प्रभावित गरिब विपन्नलाई अझै राहत प्रदान गरेको छैन् । ‘गाँउगाँउ खटिएर कर्मचारी विवरण संकलन गरिरहेका छन्,’ नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चिरिञ्जिवी सापकोटाले भने, ‘अब एक दुई दिनमा वितरण गर्छौं ।
'चामल नभएपछि मेयरलाई फोन गरेँ, उठाएनन्'
प्रकाशित : चैत्र २२, २०७६ १४:३४